कांग्रेस सरकार जाने विषयमा अझै एकमत हुन सकेन – ThePressNepal
कांग्रेस सरकार जाने विषयमा अझै एकमत हुन सकेन
काठमाडौं चैत्र ५ । ओली सरकारको विषयलाई प्रतिस्थापन गर्ने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल अझै एकमत हुन सकेका छैनन् । नेपाली कांग्रेस भित्रको पौडेल तथा सिटौला पक्ष तत्काल अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दै प्रतिस्थापन गर्नु पर्ने आवाज उठाउदाँ संसदिय दलका नेता समेत रहेका सभापति शेरबहादुर देउवा भने पर्ख र हेरको अवस्थमा छन् ।
कांग्रेस महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले बिराटनगर पुगेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध १० दिनभित्रै हटाउने घोषणा गरेका छन् । उनको भनाई छ- ‘अब हप्ता १० दिनमा अविश्वास प्रस्ताव आउँछ ।’कोइरालाले माओवादी केन्द्र र जसपासंगको सहयोगमा कांग्रेसले सरकार बनाउनुपर्ने भन्दै भने- ‘हामीले सरकारको नेतत्व गर्नुपर्छ, माओवादी, हामी र जसपा मिलेर जानुपर्ने हो । बहुमत आइहाल्छ’
जनता समाजवादी पार्टी र एमालेभित्रै विवाद रहेकाले कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव दर्ताका लागि पर्ख र हेरको भन्दै ओली सरकारमा गएर उनीहरुको दोष किन बोक्ने ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
उता स्याङ्जा पुगेका युवा नेता गगन थापाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई विदा गरेर सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले लिने बेला आएको बताएका छन् । उनको भनाई छ- ‘कांग्रेसले अब केपी ओलीलाई घर पठाउनुपर्छ । कांग्रेसले छोटो समयका लागि भए पनि सरकारको जिम्मा लिएर निर्वाचन गराउनुपर्छ ।‘ सरकारको नेतृत्व गर्दै अवको दुई बर्ष पछिको निर्वाचनमा कांग्रेसले नेतृत्व गर्नु पर्ने बताउदै भने – ‘चुनावमा गएर जनतालाई भन्नुपर्‍यो । संविधान बनाऊ भन्नुभयो, बनायौं । नेकपाले सरकार चलाउन सकेन र अब कांग्रेसले चलाउँछ । ‘नेकपा सरकारले रेल, पानीजहाज, हवाइअड्डा भनिरह्यो । कम्युनिस्ट सरकारको पालामा सपना अटायो, मान्छे अटाएन ।’
तर प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिनका लागि राजनीतिक वातावरण बनिनसकेको जनाएका छन् । सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री खान मरिहत्ते नगरेको पनि शर्माको दाबी गर्दै शर्माले वातावरण बन्यो भने जिम्मेवारी लिनबाट पनि नभाग्ने मनस्थितिमा देउवा रहेको पनि जिकिर गरे ।
Tags: काँग्रेस गगन थापा डा शंशाङ्क कोइराला विश्वप्रकाश शर्मा
Previous एमालेको नेपाल- खनाल समुहले पारित गरेका १७ बुँदे प्रस्ताव के हुन् त ? (पूर्णपाठ)
Next संसद पुन स्थापना पछिको चौथो बैठक पनि सोक प्रस्ताव पारितमै सिमित हुने त हैन ?